नेपाल बैंकले फागुन २५ मा बोलायो एजीएम, एफपीओसहित अरु के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल बैंकले फागुन २५ मा बोलायो एजीएम, एफपीओसहित अरु के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
काठमाडौं - फागुन २५ गते नेपाल बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा एफपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । बैंकले नेपाल सरकारको हिस्सा ५१% र सर्वसाधारणको ४९% कायम गर्न १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख ८५ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्न लागेको हो ।
बैंकले नियामक निकायबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गनुपर्ने निर्देशन आएमा यसको सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने एजेन्डा पनि सभामा लैजानेछ । साधारण सभा गर्न बैंकले फागुन ९ गतेदेखि २५ गतेसम्म बुक क्लेज गर्ने भएको छ । सभा नेपाल एपीएफ क्लब हलचोक, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।